“Marcelo oo qura ma ahane Real Madrid waa inay beddeshaa kala bar ciyaartoyda haatan u ciyaarta” – Gool FM
“Marcelo oo qura ma ahane Real Madrid waa inay beddeshaa kala bar ciyaartoyda haatan u ciyaarta”
Haaruun February 20, 2019
(Madrid) 20 Feb 2019. Tababarihii hore ee kooxda Real Madrid ee waddanka Spain John Toshack ayaa ku baaqay in isku shaandheyn ballaaran lagu sameeyo Real Madrid, isla markaana Marcelo oo qura uusan noqon midka ay iibinayaan.
“Real Madrid waa inay isbeddel weyn ku samaysaa ciyaartoydeeda, ma ahan Marcelo oo keliya” sidaa waxaa Toshack uu u sheegay ‘El Golazo del Gol’.
John Toshack waxa uu laba jeer oo kala duwan tababare u soo noqday Real Madrid 1989-90, 1999, waxaana uu u dhashay waddanka Wales.
Macallinkii hor ee Madrid ayaa aad u ammaanay laacibkii hore ee Real Cristiano Ronaldo oo caawa isagoo u ciyaaraya Juventus ku soo laaban doona Magaallada Madrid, halkaasna ciyaar ka tirsan 16 dhammaadka Champions League ay kula yeelan doonaan Atletico Madrid.
Mar uu Toshack ka hadlayay Cristiano Ronaldo waxa uu yiri; “haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba howshiisa ayuu wataa, waxaa jiro dad badan oo sheegay inay kubadda cagta u ciyaaraan hal arrin ama laba arrin, laakiin eeg goolashaas, iyo koobabkaas uu Ronaldo qaaday… waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican taariikhda kubadda cagta, waxaana hubaa in kulanka caawa uu si fiican u baacsan doono Atletico”.
Harry Kane oo ka soo bogsooday dhaawicii uu ku maqnaa tababarkana la bilaabay kooxdiisa Tottenham
"Arsene Wenger waa tababaraha ku haboon in uu Maurizio Sarri ka beddelo xilka Chelsea"